Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काममा तिब्रता – Emountain TV
पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काममा तिब्रता
बारा, १ फाल्गुन । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको कामले तिब्रता लिएको छ । रक्सौलदेखि बाराको अमलेखगंजसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउँने कामले गति लिएको हो । भारतले पाइपहरु बनाइ सकेकाले केहिदिन भित्र मेशिनरी सामान आएपछि पाइप बिछ्याउँन सुरु गरिने छ ।
भारतीय पक्षले पाइपलाइन निर्माणमा तत्परता देखाएपछि कामले तिब्रता लिएको हो । वीरगञ्जको शंकराचार्य गेटबाट वीरगञ्जकै गण्डक नहरसम्म वाईपास सडकको दायाँ भागबाट र त्रिभूवन राजपथको गण्डक अमलेखगंज खण्डमा सडकको बायाँ भागबाट पाइप लाईन निर्माण गर्न लागिएको हो । झण्डै तीन सय करोड भारतीय रुपैँयाको लगानीमा पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउँन लागिएको हो । त्यो मध्ये भारतले दुई सय करोड भारु र नेपालले ७५ करोड भारु लगानी गर्ने छ । भारतले पाइपहरु बनाइ सकेकाले केहिदिन भित्र मेशिनरी सामान आएपछि बिछ्याउँन सुरु गरिने छ ।
पाइपलाइन विछ्याउँनका लागि सर्भे, स्वाईल टेष्टिङ, रेखाङ्गन पिलरहरु स्थापना गरिएको छ । नेपाल भित्रिएको पाईप १० दशमलव ७५ ईन्च गोलाई र ० दशमलव २१९ ईन्च मोटाईको रहेको छ । भारतीय कम्पनी जिन्दलले माटो परिक्षण गरेर पाइपको गुणस्तर राम्रो रहेको विज्ञको भनाई छ ।
भारत विहार राज्यको बरौनी रिफाईनरीबाट पटना–मुगलसराय हुँदै कानपुरसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुँने पाइपलाइन पहिले नै संचालनमा थियो । विहार कै सिवान भन्ने ठाउँमा पोईन्ट बनाएर त्यहाँबाट एउटा लाइन भारत उत्तर प्रदेशको बैतालपुर सम्म र अर्को लाईन सिवानबाट मोतिहारी हुँदै अमलेखगंज सम्म जोड्ने योजना छ । मोतिहारीदेखि रक्सौल बोर्डर सम्म ३३ दशमलव ७ किलोमिटर र रक्सौल बोर्डरदेखि अमलेखगंज सम्म ३६ दशमलव २ किलो मिटर दुरी छ । सडक क्षेत्रभित्र २ दशमलव ५ मिटर र खोला तथा गहिरो भागमा १५ मिटरको गहिराइमा पाइप बिछ्याइने छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ साउनमा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला पाइपलाइन बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । त्यपछि पाइपलाइन बिस्तारले गति लिएको हो । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम आयात गर्दा आपूर्ति सहज हुँनाका साथै ढुवानी लागत र नोक्सानीमा कम हुने निगमको विश्वास छ । अहिले ७० प्रतिशत इन्धन रक्सौल नाकाबाट भित्रने गरेको छ । पाइपलाइन बिस्तार तोकिएको समयमा पुरा भए पटक देखिने इन्धन संकट समाधान हुने अपेक्षा छ ।